Dalalka adduunka ugu farxadda badan iyo sida ay u kala horreeyaan | Ogaalnews	CIMILLADA HARGEYSA
Dalalka adduunka ugu farxadda badan iyo sida ay u kala horreeyaan
TweetFarxad waxa ay qayb weyn ka qaadataa dareenka iyo aragtida umadaha kale ka aaminsan yihiin dadka goob u wada nool. Farxadda waxa aasaas u noqda qanacsanaanta nolosha iyo qaddarka lacag ah ee dakhliga u ah. In kasta oo qiimayntani ay dhinac ka raran tahay isla markaana aan ay meesha ka maqan tahay cid aqoon u leh diinta Islaamka iyo sida dadka Muslimiinta ahi ugu qanacsan yihiin nolosha, waa hubaal in qof kasta oo Muslim ahi aaminsan yahay inaanay jirin farxad ka haddii uu si wanaagsan u raaco Kitaabka Quraamka Kariimka ah iyo Sunnaha Nebiga (NNKHA). Haddana, qiimayntan waxa aynu u soo qaadanayna sida ay aaminsan yihiin dadka kale iyo aragtiyahooda.
Farxadda dhammayska tirani maaha mid si sahlan ku timaadda. Qiimayntan oo ay sameeyeen cilmi-baadhayaal mahcadka Gallup World Poll waxa ay ka hawl-galeen kumanaan deegaan oo ka tirsan 155 dal oo adduunka ka tirsan intii udhaxaysay 2005 ilaa 2009 si ay u cabbiraan laba nooc oo xaaladaha nolosha wanaagsan ah.
Ugu horrayn, waxa ay su’aaleen dadkii ka qayb-galay sida ay ka dareemaan kalsoonida ay ku qabaan noloshooda, waxaanay jawaabahooda u kala horreysiiyeen nidaam u dhigan ‘Qiimayn nololeed’ oo darajadeedu u dhaxayso 1 ilaa 10. Dabadeed, waxa ay weydiiyeen su’aalo ku saabsan sida ka dareemayaan xaaladda uu ku sugnaa maalmihii hore. Jawaabahaasi waxa ay u ogolaadeen cilmi-baadhayaasha inay darajeeyaan waayo-aragnimada ay helayeen maalin walba, oo ay ka mid yihiin sida haddii uu dareemo degenaansho wanaagsan, ixtiraam, caafimaad wanaagsan iyo inuu ku kalsoon yahay xaaskiisa/xaaskeeda haddii uu jiro.
Liiska dalka Caalamka ugu farxadda badan waa kuwan sida ay u kala horreeyaan
RAADI WARARKII HORE	Ugu dambeeyey/Recent Posts SOMALILAND INFOTECH SOLUTIONS Former President adviser calls for new EASSy cable bidding Minnesota’s Somalilanders celebrate their homeland’s democracy Somalia's once stable Puntland hit by insurgency Ololaha Hangasha: Hablo Suxufiyiin ah oo Asay u qaaday Soomaaliya Hello world! Dalalka adduunka ugu farxadda badan iyo sida ay u kala horreeyaan	Qormooyinka ugu Akhris badan
Maxaad ka taqaanaa astaamaha Cudurka Qoorgooyaha iyo sida loo daweeyo ? - 32,862 viewsSomaliland: If Eritrea & South Sudan Could Gain Sovereignty, So Could Somaliland - 17,172 viewsSomaliland hopes for international recognition - 15,795 viewsGaddafi:’It’s a conspiracy to take our oil and a plan to re-colonise our country’ - 14,896 viewsHead of Uganda EC: I will announce winner within 48 hours - 11,777 viewsDalalka adduunka ugu farxadda badan iyo sida ay u kala horreeyaan - 11,554 viewsSomalia: Exposing the Hideous Face of the Puntland Regime - 11,455 viewsTel Aviv: Hostage Drama in Turkish Embassy - 11,174 viewsIGAD with the Largest Donors Delegation arrives Somaliland - 10,887 viewsSomaliland Coastguards and Ground Troops—The Real Panacea for Sea Piracy - 10,844 views